Embo MaXhosa: Zingce ngolwimi lwakho
Le blog yakhelwe ukuphuhlisa ulwimi lwesiXhosa, nokukhuthaza izithethe namasiko anenkqayi akwantu. Njengoko uninzi lwentsha yomXhosa yanamhlanje lungasasebenzisi iilwimi zalo phantse kuzo zonke inkalo zempilo zethu, kuyimfuneko ukuba kubekho ndlela zimbi zokugcina okanye ukukhumbuza isintu ngokubanzi ngeelwimi, amasiko nezithethe zomntu ontsundu - umXhosa ke kweli inqanaba. Izimvo zakho, ulwazi okanye imiba onkqwenela ukuba iphicothwe yamkelekile, thumela ku - embomaxhosa@live.com
Ngokokwam ukucinga, abona bantu bajongelisa phantsi ulwimi lwethu ikwa sithi bantu balo! Kukho izinga eliphakamileyo lokwamnkeleka kwemeko yomXhosa ongakwaziyo ukuthetha isiXhosa okanye naluphi na olunye ulwimi lwabantsundu. Ewe amaxesha ngamanye, kwaye phantse yonke into yenziwa ngokusebenzisa ulwimi lwasemzini - isingesi ke, kodwa ilihlazo elinganyamezelekiyo ukubona umXhosa ongakwaziyo ukuthetha ulwimi lwakhe futhi angabi nawo nomdla wokuzazi nalapho asuka khona.
Ewe, lomba udala ingqondo-mpikiswano ngoba, umzekelo - nam enyanisweni njengonozala osemtsha, iminqweno yam kukuthumela unyana wam kwizikolo ezisezidolophini - apho ke kuhlohlwa ngesilungu. Bendisoloko ndizithembisa ngelithi, uyakuthetha isilungu eso phaya esikolweni kodwa xa efika ekhaya uzakuthetha isiXhosa. Mva nje, ezozicwangciso ziya zisiba yimibono ngoba nasekhaya ngoku kusetyenziswa ulwimi lwesingesi ukulungiselela umntu osincedayo ophuma emantla eAfrika.
Kuyo yonke lonto, andethi-mandla ekuziqhayiseni ngobuXhosa bam - ndingumXhosa kwaye ndiyazingca ngalonto! Ndizimisele ukwenza konke okusemandleni am ukukhulisela abantwana bam ekusazini isiXhosa nentsingiselo yamasiko aso.
Ingaba usengxakini yokungasazi isiXhosa? Yintoni unobangela? Uyafuna ukusazi okanye wanelisekile yimeko okuyo? Khumbula ukuba, ngokwaneliseka kwakho ekungalwazini ulwimi lwakho unyhasha uhlanga lwakho. Lonto eyenza ukuba kukhule iilwimi zasemzini, kude kucace ukuba olu lwethu ulwimi sinentloni ngalo.
Iyandikhwankqisa into yokuba, xa umXhosa ethe wabhuda isilungu kwintetho yakhe - kuqala kwathina ukujongana ukubonakalisa ukumenyelisa okanye ukuhlazeka yilonto. Mamela owasemzini ke xa ethetha isilungu esingekho-mgangathweni - anqwale nje umntu omnyama ukubonakalisa ukuba uyayiqonda ukuba ufuna ukuthini (ungenzi njalo nje nakulo wakuni?). Into eyenza lento kukuba asizindli ngokungakwazi kwethu ukuthetha isilungu, lonto eyenza uba sicinge ukuba ilihlazo lonto.
Zidle xa usophula ulwimi olungelolwakho ngoba olwakho uyalwazi! Kwaye yithathe njengempumelelo ukwazi ezinye iilwimi hayi ngokunyanzeleka. Kulungile kananjalo usityabula isilungu ukusithetha oku, kodwa ngokokwam ukucinga - yiba kanti uyalwazi nolwakho ulwimi.
Posted by Embo maXhosa at 11:35 PM
Nkosinathi Sikwati October 16, 2012 at 7:27 AM
Umna ndingu mxhosa ophuma kweli phondo lase Freyi stata,isixhosa lulwimi lwasekhaya,ndinga thanda ukuncedwa ngazinto zithile endinga thanda ukuba nolwazi oluthe vetshe ngazo,kwaye kwezinye zezo zinto sisiduko sam samaKhuma ndingathanda ukusazi banzi esi siduko.Mna endikwaziyo kukuthi:Ndili Khuma imbathane umatshaya uxesibe ukhandanyawana.nako endikwaziyo qha,ndingathanda ukwaziswa ngoku phangaleleyo ngaso.
amazangwa '.asukaphi kwaye azithutha njani
Simamkele Nogemane September 5, 2013 at 3:43 AM
MaXhosa asamhle,nguNogemane lo uTOLO isiduko,ndinomnqweno wokwazi ukuba kwenzeka njani ukuba kubekhona oNogemane abango Faku,kwaye kukho into ethi sinobudlelwane nabo
Anonymous October 2, 2013 at 6:32 AM
NdinguMamaya, ndicela ukwazi ngokuphangaleleyo ngesiduko esi sam
edward August 20, 2015 at 7:02 AM
Bhotani mna ndingu ntandazo mbodla bendicela nje imbali ngamatshutsha
Thembile Tinkler Thembile Tinkler March 9, 2016 at 3:47 AM
Bhontani mawethu Amawele azelwe nge operation leliphi elidala kuwo?
Bhotani bantakwethu mna ndifuna ukwazi ngoTOLO ngemvelaphi yabo
Malwande Ayanda Marepula-Maneli May 16, 2018 at 11:09 PM
Ndiyabhotisa kuwe nkosikazi.
Ndithe ngokubhadula ndifunisa ndabhaqa i-blog yakho. Ndicela ukwazi nzulu ngemvelaphi, umnombo kwakunye nokunqulwa kwamaJwarha.
Ngelishwa ndizalwe yintombi ndakhulela kulomama ndizibiza ngesiduko sakhe, noxa ndiliJwarha nje ngokwesende.
Ndakuvuyiswa kukufunxa kuloomthombo wakho wolwazi...
Bhotani mzi ontsundu ndicela ukuchazelwa ngoo Zumbe,Ngcwina Sqwephu Solusu? ndicela ucacise banzi ba nalo lwazi
Tamara Booi Entrepreneur, Professional Marketer, Freelance Writer, Mother & Wife